CNaPS tany Toamasina Nanome telo volana ny mpampiasa hanoratra ny mpiasany anatin’ny CNaPS
Mba ho lehilahy mahay miakanjo
Hampiavaka anao amin’ny hafa ny fomba fiakanjo voasafidy tsara. Ireto misy toro-lalana mety hanampy anao raha toa ka ilaina :
Iray volan’ny vehivavy afrikanina tatsimo : Nizara traikefa tamin’ireo vehivavy “influenceuses” i rtoa Baleka Mbete
Ao anatin’ny hetsika fankalazana ny iray volan’ny vehivavy afrikanina tatsimo dia nanasa an-drtoa Baleka Mbete, izay filohan’ny antenimieram-pirenena Afrikanina Tatsimo teo aloha ny masoivohon’i Afrika Atsimo eto Madagasikara , rtoa Maud Dlomo.
Fanabeazana ny zaza latsaky ny 6 taona : Mila hofanina, na ireo mpitaiza ao an-trano aza
Mila ianarana ny fitaizana sy fanabeazana ny zaza latsaky ny 6 taona araka ny fanazavan’ireo mpanabe ankizy mivondrona ao anatin’ny Faribolan’ny mpanabe na ny Cercle des Educateurs.
Bebe Razafindrafara Nifanesy nodimandry ny vady aman-janany
Renim-pianakaviana nisedra olana maro tamin’ny famoizana ny ankohonany tao anatin’ny herintaona i Bebe Razafindrafara.
« Devoirs de vacances » : Ahoana no hanampiana azy hanao izany?
Efa miditra tanteraka anatin’ny vanim-potoanan’ny fialan-tsasatra lehibe ny ankizy amin’izao fotoana izao.
Miandrarivo Noleran-drafiny antsy ilay vady vao
Efa eo an-dalam-pisamborana ilay nahavanon-doza an’ilay famonoana lehilahy vao vita mariazy nefa tsy niaina vola tantely akory ny mpitandro filaminana ; r
Ny volombava mety amin’ny firafitry ny tarehy
Tsy manendrika ny tarehy rehetra ny karazana volom-bava misy fa miankina amin’ny firafitry ny tarehy no tokony hisafidianana azy. Ireto misy toromarika ny amin’ny fisafidianana ny karazana volom-bava mety :
Ny tsy fahafantarana ny lalàna mifehy ny fiahiana ara-tsosialy no mahatonga ny taha ambanin’ny mpiasa misitraka izany eto Madagasikara.
Eo koa ny mpampiasa izay minia mandika io lalàna io, ka tsy manatanteraka ny andraikiny. Raha ny antontan’isa dia 363. 531 ireo mpiasa voasoatra anarana ao amin’ny CNaPS, ary 338. 203 isa no mandoa latsak’emboka amin’ny seha-pihariana ankapobeany raha 25. 328 kosa no mandoa latsak’emboka sy mpikambana avy amin’ny seha-pambolena. Noho izany indrindra dia tsy mbola manara-penitra ny fepetran’ny asa eto Madagasikara. Tsy mitsaha-manentana ny mpiasa sy mpampiasa anefa ny tahirim-pirenena, mampahafantatra ny zony sy ny adidiny, amin’ny alalan’ny fiofanana mitety faritra. Tamin’ny herinandro lasa teo dia tany Toamasina no nanatanterahan’izy ireo izany: mpitantana orinasa, mpiasa, sekoly, mpitondra fivavahana, mpiandraikitra sy mpiasa mbola ECD avy amin’ny kaominina, faritra, ary ny mpianatry ny anjery manontolo no nisitraka izany. Nahatratra 122 isa ireo mpandray anjara. Nisy tamin’ireo mpandray anjara moa ny nangataka ny hanovàna ny volavolan-dalàna hanaraka ny toetry ny andro. Tsiahivina fa araka ny filan-kevitry ny ministra tamin’ny 03 mey teo dia omena telo volana ny CNaPS, hanohy ny fanentanana mba hidiran’ireo mpiasa rehetra ho mpikambana ao aminy, ary raha dila izay fe-potoana izay, dia tsy maintsy manao ny fanambarana ireo mpiasa rehetra ny mpampiasa, mba hisian’ny fiahiana ara-tsosialy ho an’ireo mpiasan’izy ireo.